याे नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्दैनः नेता रिजाल - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्राथमिकता गुमाएर आएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेताहरूले वर्तमान आवश्यकताको प्राथमिकता सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकारले प्राथमिकता गुमाएर ल्याएको नीति र कार्यक्रमले मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने बताए ।
‘सरकारले प्राथमिकता गुमाएको र प्राथमिकता गुमाएर बनेको कार्यक्रम, नीतिले यो संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन । त्यसैले ६३ पानाको नीति कार्यक्रम बिर्सेर प्राथमिकतातर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीबाट आउने अवसर र चुनौतीको सामना गर्ने कुराका लागि अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु ।’
नेता रिजालले सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले भरोसा गर्न सकिने कुरा नभनेको बताए । अन्तिम समयमा आएर अलिकति बोले पनि सरकारले गम्भीरता नदेखाएको उनले आरोप लगाए ।
कांग्रेसका अर्का नेता डा. शशांक कोइरालाले कोरोना महामारीको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने भए पनि ध्यान अन्यतिर गएको बताएका छन् । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान नगएको उनले बताए ।
अर्का नेता प्रदीप गिरीले विश्व नै कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले पुरानै कुराहरूलाई दोहोर्‍याएको बताए । कोरोनाको सामना गर्न नेपालसँग पर्याप्त तयारी र स्रोत साधन नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा भनियो । दोहोर्‍याइयो । जनतालाई कुनै पनि आत्मविश्वास, आशा र भरोसा नदिने र आन्तरिक रूपमा पुरानै योजना पूरा गरिनेछ भन्ने मन्त्र मात्रै जप गर्नु साह्रै हास्यास्पद हो ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला ठोस नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रगतिवद्धता कमजोर देखिएको उनले बताए ।